Iri rako Bhizinesi rinoziva nezve mana Akakosha Metric? | Martech Zone
Iri rako Bhizinesi rinoziva nezve mana Akakosha Metriki?
China, May 24, 2007 Mugovera, Nyamavhuvhu 4, 2007 Douglas Karr
Ndakasangana nemutungamiriri anoshamisa wemuno kwete kare kare. Kuda kwake indasitiri yake uye nemukana iwo wawakaunza kwaitapukira. Takataura nezvezvinetso zveindasitiri yebasa uko kambani yake iri kuita mucherechedzo.
Iyo indasitiri yakaoma. Mabhajeti akaomarara uye basa racho dzimwe nguva rinogona kunzwa risingakundiki. Patakakurukura matambudziko nematambudziko, ndakanzwa kuti zvakasvika pamatanho mana akakosha.
Zvichienderana nebhizinesi rako, mametric ane hukama nemazano aya anozochinja. Iwe unofanirwa kunge uine metric dzakabatana neyese, zvakadaro. Iwe haugone kusimudzira izvo zvausingakwanise kuyera!
Kugutsikana chinhu chinonyora zvakapetwa kaviri kukambani yako. Isu pamwe tese takanzwa iyo 'whew' mushure mekunge munhu asina kugutsikana mutengi arega patiri. Asi chatinogara tichiregeredza inyaya yekuti vanotaurirawo vamwe vanhu gumi nevaviri kusagutsikana kwavo. Saka… iwe hausi kungorasikirwa nemutengi, iwe wakarasikirwawo netarisiro yekuwedzera. Usambofa wakakanganwa kuti vatengi (nevashandi) vanosiya nekuti havana kugutsikana vanoudza vamwe vanhu!
Sezvo kambani iri kuvashandira isingateereri, vari kuenda kunotaurira wese munhu wavanoziva. Izwi remuromo kushambadzira hachisi chinhu chakataurwa nezvakaringana, asi chinogona kuve nechakakura kukanganisa bhizinesi - rakanaka uye rakashata. Zvishandiso seInternet zvinowedzera kusagutsikana.
Ita shuwa kuti urikutarisa iyo tembiricha nhanho yevatengi vako uye kuti ivo (kupfuura) kugutsikana. E-mail yakapusa, kufona, kuongorora, nezvimwe zvinogona kuita gomo remusiyano. Kana vasina mukana wekunyunyuta kwauri - vari kuzonyunyuta kune mumwe munhu!
Vatengi vanogutsikana vanoshandisa yakawanda uye vanowana vatengi vakawanda iwe.
Kuchengetedza ndiko kugona kwekambani yako kuchengetedza vatengi vachitenga chigadzirwa chako kana sevhisi.
Kune webhusaiti, chengetedzo ndiyo muzana yevakazara vakasarudzika vashanyi vari kudzoka. Zvepepanhau, kuchengetwa ndiyo muzana yemhuri inomutsidzira kunyorera. Kune chigadzirwa, chengetedzo ndiyo muzana yevatengi vanotenga chigadzirwa chako zvakare mushure menguva yekutanga.
Kuwana ndiyo zano rekukwezva vatengi vatsva kana nzira nyowani dzekuparadzira kutengesa chigadzirwa chako. Kushambadzira, Kushambadzira, Kuendesa uye Izwi reMuromo zvese zvidiki-nzira zvaunofanirwa kunge uchienzanisa, kuyera, uye kupa mubairo.
Usakanganwa… kuwana vatengi vatsva kunodhura kupfuura kuchengeta zviripo. Kutsvaga mutengi mutsva kutsiva uya waakasiya hakureri bhizinesi rako! Izvo zvinongounza izvo kudzoka par. Unoziva here kuti zvinoda marii kutenga mutengi mutsva?
Kubatsira, chokwadika, imarii yasara mushure mezvese mari yako. Kana iwe usiri kubatsira, hauzove uri mubhizinesi kwenguva refu. Mepu yemubhadharo yakakura sei chiyero chemubhadharo… vanhu vazhinji vanoteerera zvakanyanya kune izvi asi dzimwe nguva kune kukanganisa. Wal-mart, semuenzaniso, ane yakaderera kwazvo purofiti margin asi ndeimwe yemakambani anobatsira kwazvo (muhukuru) munyika.
Kunze kweizvi zvese, hongu, ndiHurumende.
Pane iyo Geek Scale, Rate Izvi!
Hitch uye Kushambadzira
Carolina Chiitiko Kuronga
May 24, 2007 pa 9: 08 PM
Anoshamisa post! Aida maonero ako, kunyanya pakubata kwevatengi. Ndatenda.
May 25, 2007 pa 2: 05 PM
CHETE chinhu chinonyatso kusarudzika kuchitoro, chitoro, kambani kana sangano pasi pemugwagwa ibasa redu. Zvinosuruvarisa, mazhinji, makambani mazhinji anotadza kusvika pakuzadzisa tarisiro, ndoda kudarika. Yakakura posvo uye inofanirwa kuve chiyeuchidzo chenguva dzose kune chero kambani ine hanya nebasa.
May 25, 2007 pa 5: 12 PM
Yakakura posvo yaive kuyedza kuichengetera kune inonaka… asi ichaverenga mamaki… !! Kuongorora kukuru!
May 28, 2007 pa 11: 44 AM
LOL! Ini ndoda iyo quote yehurumende pakupera kweichi posvo! Ichokwadi kwazvo. Hazvina basa kuti bato ripi riri kufambisa showo, vanhu havagutsikane neCongress, havagutsikane neMutungamiriri, uye vazhinji kunyangwe nehurumende dzemuno nedunhu.
Uye iwe unoziva chii ??? Hurumende inongo chengeta kweinenge mwedzi mitanhatu kunze kwetemu yega yega - Panguva yesarudzo zvakare!